Iindaba -Icandelo laseTshayina lokungenisa kunye nokuthumela kwelinye ilizwe lisajongana nokungaqiniseki ngakumbi ngo-2021
Icandelo lokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle lase China lisajongana nokungaqiniseki ngakumbi ngo-2021
[Intatheli ye-Global Times yenethiwekhi yehlabathi uNi Hao] kwiinyanga ezimbini zokuqala zowama-2021, ukungenisa nokuthumela ngaphandle e-China kwenze isiqalo esihle, kwaye idatha yokonyuka okuthe kratya ngonyaka-nyaka inyuse kakhulu kulindelo lweemarike. Isikali sokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle asigqithi nje kude kunelo xesha linye kulo nyaka uphelileyo, kodwa sonyuka nge-20% xa kuthelekiswa nexesha elifanayo ngo-2018 nango-2019 phambi koqhambuko. Inoveli yase-China i-coronavirus pneumonia peak incopho, eyahlalutywa emva kwemini ye-8 ka-Epreli, ikholelwa ekubeni ukusukela kunyaka ophelileyo, i-China iqhuba uthotho lwemigaqo-nkqubo eqhelekileyo kurhwebo lwangaphandle, ejongene nefuthe lesifo esitsha sesifo somoya. Idlale indima ebalulekileyo ukunciphisa iindleko, ukuthintela umngcipheko, ukubeka iiodolo nokwandisa imarike yamashishini orhwebo lwasekhaya nakwamanye amazwe. U-Gao Feng uthe ngemizamo edityanelweyo ngurhulumente, amashishini kunye nemizi-mveliso, urhwebo lwangaphandle e-China luqale kakuhle kwikota yokuqala, esisiphumo sendima ebalulekileyo edlalwe yimarike kulwabiwo lwezixhobo kunye nendima engcono edlalwe ngurhulumente.
Kutshanje, iSebe lezoRhwebo liqhube uphando lwemibuzo kumashishini angaphandle angama-20000. Ngokweziphumo, ii-odolo ezandleni zamashishini ziye zaphucuka xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. Malunga nesiqingatha samashishini bacinga ukuba ukuncitshiswa kwerhafu, isaphulelo kwirhafu yokuthumela kwelinye ilizwe, ukuququzelela urhwebo kunye namanye amanyathelo omgaqo-nkqubo anamandla okufumana.
Kwangelo xesha, amashishini abonisa ukuba kusekho izinto ezininzi ezingazinzanga nezingaqinisekanga kuphuhliso lworhwebo lwangaphandle kulo nyaka, kwaye kukho imingcipheko enje ngokungaqiniseki kwemeko yobhubhane, ukungazinzi kwesixokelelwano sonikezelo lwekhonkco loshishino kunye nobunzima imeko-bume yezizwe ngezizwe. Amashishini amancinci amashishini nawo ajongene nobunzima kunye nemiceli mngeni. Umzekelo, amaxabiso okuhambisa ngenqanawe kwinqanaba eliphezulu, ukunqongophala kwesithuthi kunye nezinye izinto ezichaphazela amashishini ukuba afumane iiodolo; Ixabiso lezinto ezingafunekiyo linyuka, kukhokelela ekunyukeni kweendleko zemveliso; ubunzima bezabasebenzi kwezinye iindawo busabonakala ngakumbi. Ukuphendula, u-Gao Feng wagxininisa, "sizakuthathela ingqalelo kuphuhliso lweemeko ezifanelekileyo, sigcine ukuqhubeka, uzinzo kunye nokuzinza kwemigaqo-nkqubo, kunye nokuphucula imigaqo-nkqubo efanelekileyo yorhwebo."